Archive du 20190606
Antoko FMDD « Tsy matotra ny fitondrana »
Aza atao tandrevaka ny fitantanana ny firenena fa na resaka daty aza ity tsy misy fanapahan-kevitra hentitra, hoy ny filohan’ny antoko politika FMDD,
Fitsinjaram-pahefana tsy tafapetraka Nitondra fanakianana goavana ny SeFaFi
Hatramin’ny nampiasana ny fitsinjaram-pahefana amin’ny endriny ankehitriny dia ny kaominina irery no hany tena vondrombahoakam-paritra mba tafapetraka, hoy ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fianam-pirenena (SeFaFi).
Clément Jaona, filohan’ny SMM “Aleo foanana ny HCJ …”
Mila foanana ny fitsarana ambony na ny HCJ (Haute Cour de Justice), izay natao hitsarana ireo olom-panjakana ambony, toy ny filoham-pirenena, filohana andrim-panjakana, praiminisitra, minisitra,
Voka-pikarohan’ny Malagasy Tsy misy vidiny amin-dRajoelina…
Andrasana izay ho fihetsika ataon'ny filoham-pirenena amin'ireo avara-pianarana sy manampahaizana Malagasy maro be fa tsy ny voka-pikarohana ataon'ny Frantsay momba ny harena ankibon'ny tany no mampirehareha.
Afera maizina 2009-2014 Boaderozy 4,5 miliara dolara no niondrana
Mahatratra 13 000 kaontenera raha kely ny boaderozy voalaza fa naondrana avy eto Madagasikara ny 2009-2014.
Andro tsy fiasana Nasavorovoron’ny fanjakana ny fampianarana
Vokatry ny tsy fahamatoran’ny fanjakana tamin’ilay resaka andro tsy iasana, dia nisavoritaka ny rehetra.
Tontolo iainana sy fizahantany Malagasy Laharana voalohany eto amin’ny Oseana Indiana
Lasan’i Madagasikara fanintelony indray ilay loka “meilleure destination verte de l’Océan Indien”.
Polisy nikasi-tanana teny Ampitatafika Haneho ny mangarahara ny minisitera
Nitondra fanazavana mikasika ilay fikasihan-tanan’olon-tsotra nitranga teny Ampitatafika ny sabotsy alina lasa teo ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka.
Ady lehibe faharoa Feno 75 taona ny “debarquement de Normandie »
Nankalazaina omaly, tany Portsmouth Angletera, ny faha-75 taonan`ny fanombohan`ny ady lehibe faharoa.
Diaben’ny silamo sy ny iray oran’ny tontolo iainana Nifandipatra noho ny serasera tsy niampita ?
Nizotra tamim-pilaminana tamin’ny ankapobeny ny fetin’ny mpino silamo dia ny “Aïd El-Fitr” omaly alarobia 5 jona.
Grand Maitre Avoko 40 taona nanaovana Kung-fu
Tany Ambositra fony izy vao 7 taona monja no niditra nanao Kung-Fu i Avoko Rakotoarijaona.
As Adema Analamanga Tsy maintsy mandresy rahampitso raha te ho tompondaka
Efa voalaza fa fihaonana hiankinan-java-dehibe eo amin’ny taranja baolina kitra Malagasy fiadiana ny ho tompondaka D-1 taona 2019 andro faha-7 farany eo amin’ny dingana faharoan’ny Thb Champion’s
Atletisma “Kid’s Mile Run” sy Tompondakan’i Madagasikara 2019 Nifanindran-dalana tetsy amin’ny kianjan’Alarobia omaly
Anio alakamisy 06 jona tolakandro vao tena hanomboka ny fifaninanam-pirenena fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2019 taranja atletisma sokajy tanora fa omaly alarobia 05 jona aloha dia ny dinika teknika
Kick Boxing Tompondakan’Analamanga 2019 Handraisan’ny seksiona 5 anjara eny Ankorondrano
Nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga amin’ny taranja Kick Boxing, Rakoto Minoharifetra teny Mahamasina omaly alarobia 05 jona fa ho tanterahina eny amin’ny kianja mitafon’Akorondrano amin’ny alahady 16 jona 2019 manomboka amin’ny 8 ora maraina tsy diso ny fiadiana ny ho
Mamosavy tena sahady !
Marina fa eo am-pelantanana ny fahefana. Tsy azo lavina fa mety afaka manao izay tian-katao manampatra fahefana ny fanjakana ankehitriny.
Zanadranavalona Anosimanjaka Nankalaza ny taom-baovao eto Imerina omaly 5 jona
Ivon’ny fankalazana ny Taom-baovao eto Imerina nomarihin’ny tarana-dRanavalotsimitoviaminandriana teny Anosimanjaka omaly alarobia 5 jona.
Rosia Hanao pi-maso an`ireo mpandraharaha sinoa
Nitsidika ara-pomba ofisialy ny filoha Rosianina Vladmir Poutine ny filoha sinoa Xi Jinping, omaly tany Moscou.
Famokarana arina any Chili Tobim-pamokarana valo no hakatona amin`ny 2040
Tsy hamokatra arina intsony i Chili hatramin`ny taona 2040, araka ny fanambarana nataon`ny filoham-pirenena any an-toerana, Sebastian Pinera.
Fandidiana maika Miantso tolo-tanana i Solofonantenaina
Efa ho 8 volana teo ho eo no nisy karazana fivontosana kely ny mason-dRakotonandrasana Solofonantenaina, tovolahikely 18 taona avy any Manalalondo.
Fandraisana an-tanana ny ankizy autiste Mila vola be ny fizahana
75.000 Ar amin'ny ankapobeny no vola ilaina rehefa manao fitiliana ankizy iray ahiana ho "autiste".
Halatra devizy sy fakana an-keriny Tra-tehaka tany Alaotra i Mamy
Voasambotry ny polisy i Mamy jiolahy raindahiny nitam-piadiana mahery vaika tamin’ny fakana an-keriny sy ny fanendahana vola vahiny sy vola Malagasy maro be tao amin’ny faritra Ambatondrazaka.